Tag: ihe omuma ihe omuma
Ihe omuma ahia ahia bu ihe nlebara anya nye Martech. Nke ukwuu nke mere na m debere Google Alerts maka okwu ahụ infographic ma ana m enyocha ha ụbọchị niile. Ebe ọ bụ na infographics abụrụla ihe ama ama, ụlọ ọrụ ọdịnaya juputara na ihe ọmụma na-adịghị mma… yabụ anyị mara mma banyere ihe anyị na-ekerịta ma ọ bụ na anyị anaghị ekenye iji hụ na anyị na-enyekarị uru. Infographic Basics Gịnị bụ infographic? Ihe 10 mere ihe omuma kwesiri ibu
N'ehihie a, a kpọrọ m ka m gaa nri ehihie na-enweghị atụ na mkparịta ụka na Indiana Business College Harrison College. A maara Indiana nke ọma maka inwe ụfọdụ ụlọ akwụkwọ kachasị mma na mba ahụ, yana ụwa, mana ndị ụlọ na Harrison ghọtara na anyị nọ na ụwa na-agbanwe ngwa ngwa. Ha na-eme ihe ike ike iji hụ na ha ga-anọ n'ihu usoro ahụ. Ka anyị na-ekwu okwu, achọpụtara m na enwere ngwaọrụ na-egbuke egbuke